Sidee buu heerkulbeegga meerkurigu u shaqeeyaa? | Saadaasha Shabakadda
Sidee buu heerkulbeegga meerkurigu u shaqeeyaa?
Jarmal Portillo | | Qalabka Saadaasha hawada, Saadaasha hawada
Heerkulbeegayaasha meerkurigu muddo ayey jireen ilaa maantana waa jiraan. Ku dhowaad guri kasta heerkulbeegga meerkuriga ayaa laga heli jiray. Waqti ka dib waa la joojiyay tan iyo markii la ogaaday inay khatar badan yeelan karto haddii ay jabto. Waxaa jira dad badan oo aan si fiican u aqoon sida heerkulbeegga meerkurigu u shaqeeyo. Tani waa mid ka mid ah sababaha sidoo kale loo mamnuucay maaddaama aysan wax magdhow ah ka bixin khatarteeda iyo halisteeda marka la isticmaalayo.
Sidaa darteed, qodobkaan waxaan ku tusi doonnaa sida heerkulbeegga meerkurigu u shaqeeyo.
1 Astaamaha ugu muhiimsan ee heerkulbeegyada meerkuriga
2 Sidee heerkulbeegga meerkurigu u shaqeeyaa
3 Sida loo aqriyo heerkulbeegga meerkuriga
4 Waxyaabaha lagu beddeli karo heerkulbeegyadan
Astaamaha ugu muhiimsan ee heerkulbeegyada meerkuriga
Waa aalad cabbiraadda heer kulka oo ka kooban guluub kaas oo tuubo khafiif ah oo muraayad ka samaysan ay fidsan tahay. Gudaha guluubka waxaa ku jira meerkurida birta ah. Birtan qaaska ah ayaa la xushay tan iyo markii uu muggeedu isbeddelayo iyadoo kuxiran heerkulka. Isaga Qalabku wuxuu leeyahay lambarro muujinaya astaamaha heerkulka. Waxay kuxirantahay qiimayaashan, muggu wuu kici doonaa ama dhici doonaa. Birtani waxaa loo isticmaali jiray inay yeelato xarun ka weyn markay badalayso muggeeda oo si fiican u muujiso xogta.
Marka la eego fudeydkeeda iyo waxtarkeeda marka laga hadlayo cabbirka heerkulka, waxay noqotay aalad aad ugu baahsan adduunka oo dhan. Isaga qiimaha heerkulbeegga meerkuriga waxay ahayd mid aad uqiima badan dadweynaha oo dhan. Sayniska daraaseeya heerkulka loo yaqaan thermology wuxuu ahaa mid si heer sare ah u horumarsan mahadnaqa heerkulbeegga meerkuriga. Kala duwanaanta heerkulka ay martigelin karto waa mid aad u ballaaran.
Sidee heerkulbeegga meerkurigu u shaqeeyaa
Marka aan ogaanno waxa qalabkani yahay aan aragno sida ay ushaqeyso talaabo talaabo. Heerkulbeegayaasha meerkuriga waxay leeyihiin lambarro muujinaya qiyamka heerkulka. Tirooyinkan waxaa lagu cabiraa xariiq aad u dhuuban oo lagu sawiro bartamaha. Khadkani waa kan mas'uulka ka ah tilmaamida qiimaha heerkulka la qiyaasayo. Haddii aan rabno inaan u isticmaalno inaan ku ogaanno heerkulka jidhka, waxa ugu caansan waa inaan guluubka dhigno carrabka hoostiisa, malawadka ama kilkilaha. Sidan oo kale, waxaan ku hubin karnaa qandhada adoo cabbiraya heerkulka jidhka.
Aan aragno tallaabo tallaabo sida heerkulbeegga meerkurigu u shaqeeyo:
Nadiifinta guluubka: Marka hore, ku nadiifi guluubka qeybta birta ah ee heerkulbeegga suuf cudbi ah oo lagu qooyey aalkolada jeermiska dila. Sidan oo kale, waxaan ku nadiifin karnaa qaybta inta badan taabata jidhkeena.
Waxaan si firfircoon uga hawlgalnaa heerkulbeegga meerkuriga: Si tan loo sameeyo, waa inaan u isticmaalnaa dhinaca ka soo horjeedka guluubka. Thanks to dhaqdhaqaaqan waxaan sameyn karnaa wixii haraaga meerkuriga ah ee haray hoos udhaca oo aan dammaanad ka qaadnaa in heerkulka la tilmaamay uu sax yahay.
Waxaan dhigeynaa heerkulbeegga kilkilaha: guluubku waa inuu ahaadaa mid ku yaal bartamaha kilkisha si uu si fiican u cabbiro qiimaha heerkulka. Marka xigta, waxaan gacanta kaga tagi doonaa dhabta dhabta anagoon dhaqaajin inta aan u ogolaaneyno heerkulka inuu sare u kaco meerkuriga oo aan hubino inaad qandho qabto.
Waxaan sugeynaa ilaa shan daqiiqo: qiyaastii waqtiga ay ku qaadato in meerkurigu kaco oo muujiyo heerkulka jidhka. Waa muhiim inaad waqtiga siiso waqtiga heerkulbeegga si wanaagsan, maadaama habkan aan uga fogaaneyno inaan ka saarno xilli hore.
Mar kale rux: Si aan mar labaad hoos ugu dhigno meerkuriga, waa inaan mar labaad ruxnaa heerkulbeegga. Ugu dambeyntiina, waxa ugu habboon ayaa ah in si wanaagsan loogu haysto kiiskeeda si uusan u jabin. Waan ognahay in birta meerkurigu tahay mid sun ah oo muraayadduna aad u jajaban tahay. Sidoo kale waa wax xiiso leh in mar kale lagu diro aalkolo ka hor intaadan keydin.
Sida loo aqriyo heerkulbeegga meerkuriga
Kaliya maahan inaad ogaato sida heerkulbeegga meerkurigu u shaqeeyo, laakiin sidoo kale inaad taqaanno sida loo tarjumo xogta. Si tan loo sameeyo, waa inaad barataa inaad si sax ah u aqriso. Ka dib markaan sugno shanta daqiiqo ee heerkulku kor u kacayo, waxaan ka saareynaa heerkulbeegga oo waxaan ilaalinaynaa khadka dhexe. Waa khadkani wuxuu inaga caawinayaa inaan muujino heerkulka jirka. Waxay kuxirantahay qiimaha ay leeyihiin, waan ognahay inaan qandho qabno iyo inkale.
Waa muhiim inaad tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u sameyso maaddaama qadka meerkurigu uusan si cad loo arkin, waa in la dhaqaajiyaa. Haddii xariiqa uu dhaafo 37 darajo waan ognahay inaan leenahay qandho. Haddii ay dhaafto uun toban meelood meel looma baahna in laga walwalo. Haddii heerkulku ku dhow yahay 40 digrii, waxaa fiican inaad dib u cabirto heerkulka ama aad dhakhso ugu tagto dhakhtarka.
Sidee Heerkul-hawleedka Mercury u Shaqeeyaa: Maxaa La Sameeyaa Haddii Uu Jabmo
Mid ka mid ah dhinacyada aasaasiga ah waa ogaanshaha waxa la sameeyo marka heerkulbeegga meerkurigu jabo. Haddii shilal kasta awgood ay gacanteenna uga soo baxdo oo ay ugu dhacdo dhulka, jabinta muraayadda, waa inaanu leenahay hab maamuus tallaabo ah. Ku habboon ayaa ah hawo u geliso deegaanka oo dhan intii suurtagal ah si looga fogaado neefsashada uumiga sunta ah. Birtani waa mid sun ah haddii la neefsado waxayna sababi kartaa dhaawac maskaxeed, dhibaatooyin maqaarka ah, dhibaatooyin caloosha ah, iwm.
Kahor intaadan guda gelin qaadista kubbadaha yaryar ee meerkuriga ah ee sameeya markii heerkulku jabo, waa inaan xiranaa waji-gashi iyo gacmo gashi si aan nafteenna u ilaalino ha u neefsanin uumiga. Sidoo kale, taabasho kasta oo maqaarka ah waxay u horseedi kartaa dhibaatooyin daran. Sidaa darteed, ujeedku waa in la ururiyo oo si fiican loo hubiyo in dhammaan luul meerkuriga la soo ururiyay.
Marnaba laguguma talin karo inaad meerkuri inteeda kale musqusha ku daadiso, maxaa yeelay waxay wasakheysaa in ka badan 1000 litir oo biyo ah oo aan loo baahnayn.
Waxyaabaha lagu beddeli karo heerkulbeegyadan
Waxaa jira waxyaabo kale oo ka xiiso badan oo lagu beddelayo heerkulbeegga meerkuriga, maaddaama aan ganacsi ahaan la heli karin maanta. Aan aragno noocyada ugu waaweyn:
Heerkulbeeg dijitaal ah: Waa mid loo adeegsado tilmaamo isku mid ah heerkulbeegga meerkuriga.
Heerkulbeegga infrared: wuxuu ka dhigayaa akhris heerkulka shucaaca maqaarku soo daayo. Waxyeello uma laha caafimaadka.
Heerkulbeegyada ilmaha: Waa aaladaha heerkulbeegga nabadeed ee aan u adeegsan karno inaan ku ogaanno haddii carruurteennu ay qandho qabaan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan sida heerkulbeegga meerkurigu u shaqeeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Qalabka Saadaasha hawada » Sidee buu heerkulbeegga meerkurigu u shaqeeyaa?